ॐॐॐ को उचारण गर्दा पनि धेरै रोगहरु निको हुने बिस्वाश – Sandesh Munch
ॐॐॐ को उचारण गर्दा पनि धेरै रोगहरु निको हुने बिस्वाश
काठमाडौँ । हिन्दु धर्म ॐ लाई म’हामन्त्र मानिन्छ । कुनै पनि पूजा वा मन्त्रोच्चारणको सुरुवात ओम्बाट हुने गर्छ । ओम्को उच्चारणले भगवान मात्र खुशी हुने होइन्, यो म’न्त्रको जपबाट मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा पुग्छ ।
ओम् उच्चारणबाट उत्पन्न हुने तरंगले दिमागलाई शान्त राख्न स’हयोग पुर्याउँछ । यसले धेरै विरामीहरु ठिक हुने कुरा वै’ज्ञानिक अ’नुसन्धानबाट प्र’माणित भइसकेको छ ।
१) थाइराइड:हरेक दिन ओम्काे उच्चारण गर्दा थाइराइडको स’मस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
२) एन्जाइटी:ओम्काे उच्चारणले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा पुग्छ । यसको उच्चारणले तनाव, ड’रजस्ता स’मस्याबाट मुक्ति पाइन्छ ।
३) स्ट्रेस वा टेन्सन:ओम् मन्त्रको जप गर्दा मानसिक शान्ति मिल्छ ।
यसले चिन्ता, तनाव, मानसिक थकानलाई टाढै राख्छ ।
४) ब्लड सर्कुलेसन :ओम्काे उच्चारणले शरीरमा ब्लड सर्कुलेसनलाई पनि स’हयोग पुर्याउँछ । यसको दिनहुँ उच्चारण गर्दा रगतमा अक्सिजनको मात्रा वृद्धि हुन्छ ।
५) स्वस्थ मुटु:दैनिक यसकाे जप गर्दा ल‌ंग्स, बिपी र ब्लड सर्कुलेसनमा सन्तुलित हुन्छ । यसले मुटुपनि स्वस्थ रहन स’हयाेग गर्छ ।
६) डाइजे शन :ओम् उच्चारणले पेटमा भा’इब्रेसन उत्पन्न हुन्छ, जसले पाचन प्रक्रिया सन्तुलित रहन्छ ।हिन्दु धर्म ॐ लाई म’हामन्त्र मानिन्छ । कुनै पनि पूजा वा मन्त्रोच्चारणको सुरुवात ओम्बाट हुने गर्छ ।
ओम्को उच्चारणले भगवान मात्र खुशी हुने होइन्, यो मन्त्रको जपबाट मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा पुग्छ । ओम् उच्चारणबाट उत्पन्न हुने तरंगले दिमागलाई शान्त राख्न स’हयोग पुर्याउँछ । यसले धेरै विरामीहरु ठिक हुने कुरा वै’ज्ञानिक अ’नुसन्धानबाट प्र’माणित भइसकेको छ ।
१) थाइराइड:हरेक दिन ओम्काे उच्चारण गर्दा थाइराइडको स’मस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । २) एन्जाइटी:ओम्काे उच्चारणले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा पुग्छ । यसको उच्चारणले तनाव, ड’रजस्ता स’मस्याबाट मुक्ति पाइन्छ ।
३) स्ट्रेस वा टेन्सन:ओम् मन्त्रको जप गर्दा मानसिक शान्ति मिल्छ । यसले चिन्ता, तनाव, मानसिक थकानलाई टाढै राख्छ ।४) ब्लड सर्कुलेसन :ओम्काे उच्चारणले शरीरमा ब्लड सर्कुलेसनलाई पनि स’हयोग पुर्याउँछ । यसको दिनहुँ उच्चारण गर्दा रगतमा अक्सिजनको मात्रा वृद्धि हुन्छ ।
६) डाइजे शन :ओम् उच्चारणले पेटमा भा’इब्रेसन उत्पन्न हुन्छ, जसले पाचन प्रक्रिया सन्तुलित रहन्छ ।
Prevपाँचसय वर्ष पुरानो गणेशको मुर्ति फेला
Nextमात्र दुइ मिनेट मै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो …
‘HOT NEWS’अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एकै दिन १६ उडान
वि.सं. २०७७ कात्तिक २९ शनिवारको राशिफल पढ्नुहोस्
दुखद समाचार ! आखिर किन गरे त पारसले आत्मा हत्या ? (27672)